Ny lesoka 5 mahafaty amin'ny fitantanana vokatra | Martech Zone
Alahady Oktobra 22, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Niasa andro aman'alina aho nandritra ny roa herinandro farany. Mampihetsi-po tokoa izany, indrindra satria manana tetik'asa marobe izay nanolo-tena hiasa. Reraka aho… indray alina tamin'ity herinandro ity dia nody aho ary natory ary nifoha 12 ora taty aoriana. Azoko antoka fa tratry ny sery aho ary nolavin'ny vatako izany satria tsy nanam-potoana hitsakoana aho. Ny olana momba ny asa dia tena tsy saro-pantarina mihitsy, tsy niresaka fotsiny an'ireo mpanjifanay izahay.
Toa vahaolana tsotra io, fa maninona ny olona no tsy miraharaha azy io foana? Heveriko fa misy antony maro:
Tsy miraharaha ny be sy ny be ianao fa ny feo mafy no jerena. Mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitrao izany amin'ny fampidirana fanovana miely be izay tsy ilaina na angatahan'ny besinimaro. Ny loza eto dia ny filazanao hoe, "Nihaino ny mpanjifa aho". Ny olana dia tsy nihaino ny mpanjifa ianaoS.
Mino ianao, amin'ny fahatsorana rehetra, fa manatanteraka drafitra mety amin'ny mpanjifa ianao. Tsara ny fikasanao. Teo amin'ny toerana mety ny fonao. Ny olana dia tsy nanamarina azy ireo aloha ianao. Ny marina dia hanao izany ianao na oviana na oviana fantaro tsara izay ataon'ireo mpanjifa amin'ny vokatrao - indrindra rehefa mihalehibe ny habeny.
Mieritreritra ianao fa mahalala bebe kokoa. Noho ny antony sasany dia nanaiky ny toerana misy anao ianao ho fanekena ny fahaizanao amin'ny sehatra iray. Ka mieritreritra ianao fa mahalala izay ilain'ny mpanjifa sy tadiaviny.
Tsy mifantoka amin'ilay olana ianao fa mifantoka sasany vahaolana nefa tsy faritana mazava hoe inona ny olana. Na, very ny toerana misy ny olana ianao raha manohy manitatra ny vahaolana.
Tsy miady ho an'ny mpanjifanao ianao. Avelanao hamboarina sy hampidirina ny vahaolana mifototra amin'ny vondron'ireo mpandraharaha sy matihanina manan-talenta mampino. Manodinkodina ny didim-pitsaranao izy ireo… ary mety hisy dikany ny hevitr'izy ireo. Ny olana dia misy dikany anatiny, fa tsy ho an'ny mpanjifa.
Indray mandeha indray, ireo dia toa hadisoana mora azo sorohana. Na izany aza, ao anatin'ny korontana ataon'ny orinasa iray misy mpiasa lehibe sy vahaolana mahafinaritra, dia mora tokoa ny mamoy ny toeran'ny mpanjifa. Raha manao izany ianao, dia haingam-pandeha ny fanaintainana ary tena tsy mahazo aina.
22 Okt 2006 amin'ny 2:05 PM
Lahatsoratra tsara Doug - nofintininao tsara ity.
# 1 dia zavatra izay sarotra tamiko foana ny niady. Indrindra amin'ireo fampiharana nataoko toa ny FormS spring sy Ponyfish, izay ahitako mpanjifa maro samihafa izay tia mangina ny fomba fiasan'ny endri-javatra iray, fa ny mpampiasa mafy be kosa mandresy lahatra ahy hanova azy.
Mazava ho azy, hitako matetika ihany koa izany amin'ny tetikasam-pampandrosoana fanao mahazatra izay misy mpitantana izay feo mafy te-ho X ho Y, fa ireo mpampiasa "tena izy" miasa ho an'ny mpitantana dia maniry mafy hiantsoantso amin'ny tsy fifanarahana.